महिनावारी बिदा दिने पहिलो युरोपियन मुलुक इटाली
२०७५ पौष ९ सोमबार, काठमाडौं । इटालीमा महिनावारी भएको बेला महिलाहरुलाई बिदा दिइन्छ । इटाली महिनावारीमा महिलालाई दिने पहिलो युरोपियन मुलुक हो । यो नियमको विषयमा इटालीको संसदमा विवाद पनि सिर्जना भएको थियो । नियमअनुसार महिलालाई मासिक ३ दिनको महिनावारीको छुट्टीको माग गरिएको थियो । ... बाँकी अंश»
डा केसीद्धारा कुनै पनि बेला आमरण अनसन बस्न सक्ने चेतावनी, कारण यस्तो
२०७५ पौष ९ सोमबार, काठमाडौं । अभियन्ता डा गोविन्द केसीले तत्काल अनसन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै १५ पटक आमरण अनसनमा बसेर ज्यान जोखिममा पारेका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन केसीले समयमै चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभए १६ औं चरणको आमरण अनसन थाल्ने बताएका हुन् । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष ८ आइतबार, काठमाडौं । तौल कम गर्नको लागि प्रोटीन महत्त्वपूर्ण भुमिका हुन्छ। प्रोटीनले तपाईंको शरीरको मेटाबालिजमलाई सही राख्छ। साथै तपाईंको भोकलाई पनि कम गर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि यसले फ्याट घटाउँछ। ... बाँकी अंश»
४ प्रतिशत मात्रै सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्था पुग्दैनन्
२०७५ पौष ८ आइतबार, बेझाड ।कुनै बेला अन्धविश्वास र अशिक्षाका कारण जीवन मरणको पर्वाह नगरी घरमै जोखिमपूर्ण सुत्केरी हुने चलन थियो । अशिक्षित, गरीब परिवारमा मात्र नभई शिक्षित र धनीमानी परिवारमा पनि स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी हुनुपर्छ भन्ने सोचाइ कमैमा थियो । यस्तो स्थिति रहेको पाल्पा जिल्लामा अहिले भने स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुत्केरी हुने महिलाको दर शतप्रतिशत नजीकै पुगेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कले जिल्लामा ९६ प्रतिशत महिलाहरु स्वास्थ्य संस्थामै पुगेर सुत्केरी हुने गरेको देखाएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष ८ आइतबार, दार्चुला । ब्यास गाउँपालिका–५ ले पहिलो पटक स्थापना गरेको नयाँ ‘बर्थिङ सेन्टर’मा बच्चा जन्माए पुरस्कार दिइने भएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७५ पौष ८ आइतबार, काठमाडौँ । बीस वर्षमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने पुड्कोपनको सङ्ख्या २१ प्रतिशतले घटेको छ । ... बाँकी अंश»
दैनिकी परिवर्तसँगै 'डायबिटिज' का रोगी बढ्दै
२०७५ पौष ८ आइतबार, काठमाडौँ । मानिसको दैनिकीमा आएको परिवर्तसँगै पछिल्ला दिनमा मधुमेह (डायबिटिज) रोगीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको चिकित्सकले औँल्याएका छन् । ... बाँकी अंश»
बाजुरामा १९ हजार बढीले गराए स्वास्थ्य विमा
२०७५ पौष ८ आइतबार, बाजुरा । बाजुराको बुढिनन्दा नगरपालिका कोल्टिको शिव मिलान पार्कमा शनिबार कृषि मेला प्रदर्शनी सप्पन्न भएको छ । बुढिनन्दा नगरपालिका को आयोजनामा सन्चालन भएको कृषि मेला प्रदर्शनीमा हेल्पटासा बाजुराको आर्थिक सहयोग रहेको थियो। कृषिकलाई प्रोत्साहन गर्न र बुढिनन्दा नगरपालिकालाई अझ कृषि क्षेत्रमा बलियो बनाउने उदेश्यका साथ सुरु भएको कृषि मेला प्रदर्शनीमा दुई सय भन्दाबढी कृष्णकको सहभागी रहेको थियो। ... बाँकी अंश»
अहिलेसम्म के के उपलब्धी हासिल गर्यो नेत्रज्योति संघ गुल्मीले ?
२०७५ पौष ८ आइतबार, गुल्मी । नेपाल नेत्रज्योति संघ जिल्ला शाखा, गुल्मीले २३ औैँ जिल्ला सभा सम्पन्न गरेको छ । जिल्ला सभा सदरमुकाम तम्घासमा सम्पन्न गरेको हो । ... बाँकी अंश»
चायाले सताएको छ ? अपनाउनुस् यी उपायहरु
२०७५ पौष ७ शनिबार, काठमाडौं । चिसो मौसममा मानिसहरुको छाला पनि सख्खा हुन्छ । यसले चायाको समस्या निम्त्याउँछ । यो समस्याले धेरै मानिसहरु समस्यामा हुन्छन् । ... बाँकी अंश»
बाजुरामा १९ हजार बढीले स्वास्थ्य विमा गराए
२०७५ पौष ७ शनिबार, बाजुरा। नौ महिना पहिले संचालन भएको स्वास्थ्य विमा गर्नको निकै उत्साह बढ्दै गएको पाइएको छ। सामाजिक सुरक्षा विकास समितिले २०७४ चैत देखि सुरुवात गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हालसम्म जिल्लामा १९ हजार ६ सय ९ जनाले स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध जनाएको बाजुरा बीमा दर्ता अधिकारी तारा रोकायाले बताए। ... बाँकी अंश»
बीसीजी खोपबाट एक महीने शिशुको मृत्यु, खोप लगाउने अनमी प्रहरीको नियन्त्रणमा
२०७५ पौष ६ शुक्रबार, इनरुवा । सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–३ शिवगञ्ज टोलमा बीसीजी खोप लगाउँदा एक महीने शिशुको बिहीबार मृत्यु भएको छ । ... बाँकी अंश»
वर्थिङ सेन्टरमा सन्तान जन्माए ५ हजार पुरस्कार दिइने
२०७५ पौष ५ बिहिबार, दार्चुला । दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने ब्याँस गाउँपालिकाले वर्थिङ सेन्टरमा पहिलो सन्तान जन्माउने आमालाई ५ हजार रुपैया दिने भएको छ । गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ धौलाकोटमा रहेको स्वास्थ्य चौकी वर्थिङ सेन्टर उद्घाटन गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप सिह बुढाथोकीले पहिलो बच्चा स्वरुप ५ हजार रुपैया पुरस्कार दिने घोषणा गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
विश्वमा ८६ प्रतिशत मानिसको 'स्ट्रोक' का कारण मृत्यु
२०७५ पौष ५ बिहिबार, काठमाडौँ । घातरोग (स्ट्रोक) का कारण नेपालमा वर्षेनी कति जनाको अकालमा मृत्यु हुन्छ भन्ने कुनै अध्ययन–अनुसन्धान भएको छैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालमा वर्षेनी तीन हजारको सो रोगका कारण मृत्यु हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विशेषगरी मस्तिष्कघातको पहिचान र यसको उपचारमा दक्ष र गुणस्तरीय पहुँच नभएका कारण दुर्गम क्षेत्रमा यसको मृत्युदर बढी रहेको बताइन्छ । ... बाँकी अंश»
त्रिवेणीमा २ जना कुष्ठरोगी भेटिए
२०७५ पौष ५ बिहिबार, बाजुरा । त्रिवेणी नगरपालिकामा २ जना कुष्ट रोगी भेटिएका छन् । नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले आयोजना गरेको छाला रोग सम्बन्धी शिविरमा जाँचका लागि आएका मध्ये २ जनामा कुष्ट रोग देखिएको हो । ... बाँकी अंश»
थाहा पाइ राखौं ई–सिग्रेटबाट श्वासप्रश्वासमा हुन्छ गम्भीर समस्या
२०७५ पौष २ सोमबार, काठमाडौं । अमेरिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको एक रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने १८ वर्षीया एक किशोरीले ई–सिग्रट परीक्षण गर्ने निर्णय गरिन् । हुनसक्छ, यस्तो प्रयोग सो रेष्टुरेन्टमा काम गर्ने अन्य कर्मचारीहरुले पनि गर्ने गरेका थिए । यद्यपि उक्त किशोरीलाई भने त्यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्यो । सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार सो किशोरीको नाम गोपनीयताको कारण खुलाइएको भने छैन । ... बाँकी अंश»
'स्ट्रोकको कारण विश्वभर ८६ प्रतिशत मानिसको मृत्यु'
२०७५ पौष १ आइतबार, काठमाडौं । नेपालमा स्ट्रोक(घात) सम्बन्धि रोगको उपचारमा सहयोग पुर्याउने र यसको समाधान छिटो भन्दा छिटो गर्ने उद्धेश्यका साथ स्ट्रोक थ्रोम्बोलाईसिस मास्टर क्लास २०१८ आयोजना गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
प्रदेश नं ३ सरकारद्वारा ९ अस्पतालका अध्यक्ष नियुक्त, उपत्यकामा सकेन
२०७५ मङ्सिर २९ शनिबार, हेटौँडा । प्रदेश नं ३ सरकारले प्रदेश मातहतका नौ जिल्ला अस्पतालमा अध्यक्ष नियुक्ति गरेको छ । ... बाँकी अंश»
हेपाटाइटिस ‘बी’ को संक्रमणबाट दुईको मृत्यु,एचआइभी संक्रमित ‘शून्य’
२०७५ मङ्सिर २७ बिहिबार, सोलुखुम्बु । जिल्लामा हेपाटाइटिस ‘बी’ को संक्रमणबाट अहिलेसम्म दुई जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला अस्पताल फाप्लुको तथ्याङ्कअनुसार हेपाटाइटिस ‘बी’ को संक्रमण भएका तीनमध्ये दुईको ज्यान गइसकेको छ । एक जना बिरामीले उपचार गराइरहेको अस्पतालकी सूचना अधिकारी सानी शेर्पाले जानकारी दिइन् । ... बाँकी अंश»
ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवतीको हवाई उद्धार कार्यक्रम शुरु
२०७५ मङ्सिर २६ बुधबार, काठमाडौँ । सरकारले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी हुने अवस्थाका ज्यान जोखिममा रहेका महिलालाई हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरी स्वास्थ्य संस्थामा लैजाने कार्यक्रम शुरु गरेको छ । ... बाँकी अंश»